အရေးတော်ပုံအောင်မြင်သွားရင် သူမပြုလုပ်မည့်အစီအစဉ်တွေကို ပြောပြရင်း မသိနားမလည်ခဲ့တာတွေကို တောင်းပန်လိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Cele Top Stars
March 28, 2021 By admin2Celebrity
သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ပီပြင်လှတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုေ တွကြောင့် ပရိသတ်တွေက သဘာဝမင်းသမီး လို့တောင် သတ်မှတ်ထားကြတာပါ။ လူတိုင်းအပေါ်မှာလည်း အမြဲကူညီတတ်တဲ့ စိတ်ထားလေးကြောင့် အားလုံးကချစ်ခင်နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်း ကျရာအခန်းကဏ္ဍကနေ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်း ပါဝင်နေ တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် တိမ်းရှောင်နေရပေမယ့်လည်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ လူထုလှုပ်ရှားမှု အတွက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုကွန် ယက်စာမျက်နှာများကနေလည်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများကို အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးရန် speak out လုပ်ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်လည်း သူမရဲ့ Facebook အကောင့်တွင် အရေးတော်ပုံ အောင်သွားတဲ့အခါ အလုပ်တွေကြိုးစားပြီး တိုင်းရင်းသားတွေနေထိုင်ရာဒေသတွေဆီသွားကာ လိုအပ်တာတွေ လှူဒါန်းသွား မယ့်အကြောင်း ရေးသား ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
” အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ပြီးသွားရင်…. အလုပ်ကြိုးစားပြီး ပိုက်ဆံ စုမယ်…(ပိုက်ဆံကတော့ အရင်စုရဦးမယ် ကိုဗစ်နဲ့မအလပေါင်းပြီး နှိပ်စက်တာ သနားစရာဘဏ် စာရင်းလေးဖြစ်နေပြီ) ပြီးရင် ကျေးဇူးရှင်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေဆီကို သွားမယ်…. သူတို့ဒေသမှာလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လှူမယ်…. အရင်တုန်းက မသိနားမလည်ခဲ့မိတာတွေအတွက်တောင်းပန်မယ်…. #အရေးတော်ပုံအောင်ရမည် ” ဆိုပြီး ရေးသား ထားတာပဲ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူ တင်ဆက်ပေး လိုက်ရပါတယ်နော်။
Photo Crd-Paing Phyoe Thu’s Facebook Account
သရုပျဆောငျ ပိုငျဖွိုးသုကတော့ ပီပွငျလှတဲ့ သရုပျဆောငျမှုေ တှကွောငျ့ ပရိသတျတှကေ သဘာဝမငျးသမီး လို့တောငျ သတျမှတျထားကွတာပါ။ လူတိုငျးအပျေါမှာလညျး အမွဲကူညီတတျတဲ့ စိတျထားလေးကွောငျ့ အားလုံးကခဈြခငျနကွေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ လတျတလောဖွဈပျေါနတေဲ့ လူထု လှုပျရှားမှုတှမှောလညျး ကရြာအခနျးကဏ်ဍကနေ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ပူးပေါငျး ပါဝငျနေ တာလညျး ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာ အခွအေနအေရပျရပျကွောငျ့ တိမျးရှောငျနရေပမေယျ့လညျး တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ လူထုလှုပျရှားမှု အတှကျ ပါဝငျဆောငျရှကျပေးနဆေဲပဲ ဖွဈပါတယျ။ လူမှုကှနျ ယကျစာမကျြနှာမြားကနလေညျး ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခံထားရတဲ့ ကြောငျးသား၊ကြောငျးသူမြားကို အမွနျဆုံး ပွနျလှတျပေးရနျ speak out လုပျပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျလညျး သူမရဲ့ Facebook အကောငျ့တှငျ အရေးတျောပုံ အောငျသှားတဲ့အခါ အလုပျတှကွေိုးစားပွီး တိုငျးရငျးသားတှနေထေိုငျရာဒသေတှဆေီသှားကာ လိုအပျတာတှေ လှူဒါနျးသှား မယျ့အကွောငျး ရေးသား ထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
” အရေးတျောပုံအောငျမွငျပွီးသှားရငျ…. အလုပျကွိုးစားပွီး ပိုကျဆံ စုမယျ…(ပိုကျဆံကတော့ အရငျစုရဦးမယျ ကိုဗဈနဲ့မအလပေါငျးပွီး နှိပျစကျတာ သနားစရာဘဏျ စာရငျးလေးဖွဈနပွေီ) ပွီးရငျ ကြေးဇူးရှငျတိုငျးရငျးသားဒသေတှဆေီကို သှားမယျ…. သူတို့ဒသေမှာလိုအပျနတေဲ့နရောတှကေိုလိုကျလှူမယျ…. အရငျတုနျးက မသိနားမလညျခဲ့မိတာတှအေတှကျတောငျးပနျမယျ…. #အရေးတျောပုံအောငျရမညျ ” ဆိုပွီး ရေးသား ထားတာပဲ ဖွဈပွီး ပရိသတျတှအေတှကျ ဒီသတငျးလေးကို တဈဆငျ့ပွနျလညျ ကူးယူ တငျဆကျပေး လိုကျရပါတယျနျော။
သွေးမြေ ကျမှုတွေ နဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေများစွာရှိနေပေမယ့်လည်း သွေးမအေးကြတဲ့ Gnen Z လေးတွေကို ချီးကျူးပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်တဲ့ ယွန်းယွန်း